Ungasinika kanjani amandla amaSeshini Wakho Wokuzivocavoca - Isitolo Sakwa-SARM e-UK
Nika Amandla Izikhathi Zakho Zokuzivocavoca Nge-Alpha Labs M-Sten
Abasubathi abangochwepheshe nabazokwakha umzimba bathembekile I-Alpha Labs M-Sten noma iMethylstenbolone uma kukhulunywa ngokwanda kwemisipha nokwenza ngcono ukusebenza kokuvivinya umzimba. I-Alpha Labs M-Sten ingabasiza bengeze amakhilogremu angama-20 emisipha esikhathini esingaphansi kwamasonto amane, futhi futhi ngoba ikhuthaza imisipha eminingi yemithambo.
Kungani Khetha i-M-Sten?
Uma ubheka ukuthola ukubukeka kwemisipha okunzima, okomile, nokuminyene, khona-ke iM-Sten ingaba yindlela enhle kakhulu kuwe. I-prohormone enamandla ingeyesibili kuya kweyodwa uma kukhulunywa ngokuqunjelwa nokuthola inzuzo ebalulekile yemisipha.
Kucatshangelwa ukuthi i-gamechanger ngabakhi bomzimba emhlabeni wonke, i-M-Sten isiza abasebenzisi ukuthi babone ukwanda kwamandla afinyelela kuma-25 phesenti nobukhulu bemisipha obufinyelela kumaphesenti angama-39 ngemuva komjikelezo owodwa. I-M-Sten ikugcwalisa ngokushesha futhi yenza izikhathi zakho zokuzivocavoca zibonakale zisebenza kahle futhi zikhiqize ngokushesha okukhulu ngaphandle kokukuletha ebangeni eliseduze nanoma yimuphi umphumela ohlangothini.
Ngaphezu kwalokhu, iM-Sten ayinabo ubudlelwano bokwamukela i-progesterone, futhi ayiguquli ibe yimetabolites ye-estrogenic. Lokhu kusho ukuthi imiphumela emibi ehlolwe yi-estrogen ingakhishwa ngaphandle, ikwenze kube ukukhetha okuhle kakhulu kuwo wonke umuntu. Ngaphezu kwalokho, iM-Sten ayiphakamisi amazinga e-prolactin. Futhi akuphazamisi ikhono lokugcina ukwakhiwa noma ukushayela ucansi. Eqinisweni, iM-Sten nayo iyathandwa ngekhono layo lokuthuthukisa izinga lamathambo amaminerali kanye nempendulo yomzimba wakho kokuya ocansini nasekuvukeni. Ngokwenza lokhu, ithuthukisa umsebenzi wobulili besilisa ukuze usebenze kahle.
Ama-Alpha Labs I-M-Sten ikhombisa ukusebenza okungenakuqhathaniswa ukuthuthukisa izinga le-protein synthesis kanye nokugcinwa kwe-nitrogen emzimbeni. Ngamanye amagama, kungenzeka ukuthi uthole izicubu zemisipha ngoba amaprotheni anempilo emzimbeni anenala kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-Alpha Labs M-Sten yenza izicubu zemisipha zisebenze kahle kakhulu, okusho ukuthi akudingeki ukuthi uphakamise umthwalo wokuphakamisa izinsimbi futhi usathola imiphumela emihle kakhulu.
Ukusetshenziswa kwale nhlanganisela yokwakha namandla kungakusiza ukuthi udlule ngokushesha emathafeni futhi uzuze imiphumela ye-hardcore ebingacabangi ngaphambili. Sekukonke, i-Alpha Labs M-Sten ayisona isidakamizwa esinamandla, esimangazayo esikhuthaza ubukhulu bemisipha yamathambo futhi sithuthukise ukusebenza kwezemidlalo lapho sihambisana nokuzivocavoca ngamandla okukhulu. Ngaphezu kwalezi zinzuzo, i-M-Sten ikusiza ukuthi ukhulise amazinga wamandla njengesilo. Iphinde ikunike amandla okuqeqesha kanzima futhi isikhathi eside, okukuvumela ukuthi uthole imiphumela esheshayo kusuka ekusebenzeni kwakho okunamandla nasekuqeqesheni ukumelana nesikhathi.
I-M-Sten ingaphezu nje kwesisindo esinamandla amakhulu namandla okuthola inhlanganisela. Ungayisebenzisela cishe lonke uhla lokwakheka komzimba futhi sawo esiningi izinhloso, kusuka ekusebenziseni ngobuningi kuya ekusetshenzisweni kwesizini. Ngesikhathi sokuphela, ungalindela ukuthola izinzuzo ze-M-Sten ngenxa yekhono layo elingenakuqhathaniswa lokuthuthukisa imetabolism. Usebenzisa i-M-Sten, ungenza inzuzo ehlanzekile futhi esheshayo ngenkathi evaliwe futhi ugcine izinzuzo ezikhona.
Iningi labakhi bomzimba nama-powerlifters bayayithanda iM-Sten ngokukwazi kwayo ukukhulisa kakhulu ukusetshenziswa kwamandla, i-fat metabolism, i-carbohydrate metabolism, kanye nokusebenza komzimba. Iphinde ithuthukise izinga le-testosterone ephelele futhi ijikeleze i-testosterone yamahhala emzimbeni. Imiphumela ye-M-Sten iletha ukubukeka okomile, okuqinile ngaphandle kokuqunjelwa noma ukugcinwa kwamanzi okungenzeki noma kube nzima ukukufeza ngeminye imithi eminingi eqinisa ukusebenza.
I-M-Sten iza nochungechunge lwemiphumela eyindilinga yonke. Kungumakhi omkhulu onamandla ongakusiza ukuthi uzuze ukuzuza okukhulu kwemisipha namandla lapho ugcwaliswa ngokudla okufanele. Into enhle ukuthi ungazuza lezi zinzuzo ngaphandle kokugcinwa kwamanzi, ngoba noma yimuphi umsebenzi onukisayo awubonakali. Sekukonke, uzobe wenza inzuzo enhle, eyomile, futhi enzima kungakapheli isikhathi esifushane.
Uma lokhu kungagcini lapho, ungathola umfutho obonakalayo emazingeni akho okuqina nokukhuthazela. Kuzoba nokuncipha kwemisipha, isikhathi sokuphumula esincane phakathi kokuzivocavoca, nokubuyiselwa ngokushesha okukhulu. Lokhu kuzokuvumela ukuthi uphinde ushaye ijimu futhi usebenze emisipheni efanayo ngaphambili kakhulu kunalokho obungeke ukwenze. Ekugcineni, lezi zinzuzo ze-M-Sten zizosheshisa imiphumela yakho.
Uhlu lwezinzuzo ezihlobene neM-Sten alugcini lapha. Isiza umzimba ukuthi ululame ngokushesha ekugqokeni kokuzivocavoca kokuzivocavoca. Iningi labasebenzisi be-M-Sten babike esikhathini esedlule ukuthi imisipha yabo yaphola ngokushesha lapho besemjikelezweni weM-Sten. Ngamafuphi, i-M-Sten iyinhlanganisela ehamba phambili yokubhukuda uma ufuna ukuthatha umzimba wakho uye ezingeni elilandelayo.
Isilinganiso esinconyiwe se-M-Sten ngamaphilisi ayi-2-3 ngosuku, okungcono ngokudla nemizuzu engama-30-45 ngaphambi kokuzivocavoca kwakho, emjikelezweni wamaviki angu-4-6. I-M-Sten ingasetshenziswa njengengxenye yesitaki esihlanganiswe ne- I-Alpha Labs TLB-150, I-Alpha Labs Epistane, I-Alpha Labs Arimstane, I-Alpha Labs Trenavar, noma ingeyakho kumjikelezo.
I-M-Sten ilungele abagijimi nabakhi bomzimba ezigabeni zokuqala, eziphakathi, nezithuthukile abafuna ukuthuthukisa imiphumela yokuzivocavoca nokusebenza kwezemidlalo. Futhi kuyisinqumo esihle kakhulu sabesilisa nabesifazane abafuna ukusheshisa isikhathi sokululama kwemisipha nokukhuthaza imisipha namandla omzimba jikelele. Lokhu kungenxa yokuthi le nhlanganisela ekhulisa ukusebenza ithuthukisa izinga lokuzivocavoca ngaphandle kokwenza izikhathi zokuzivocavoca zikhiqize futhi zisebenze kahle.
Lesi sidakamizwa esiqinisa ukusebenza saziwa ngokuhlangana kahle nezidakamizwa eziningi ezenza ngcono ukusebenza kwazo. Usebenzisa le nhlanganisela ye-bulking, ungakhomba cishe noma isiphi isici sokuguqulwa komzimba, noma ngabe senza ukuqina komzimba, kukhulise ukusebenza jikelele namandla, nokwakha imisipha. Njengoba izinzuzo zomile futhi zisezingeni eliphakeme ngokungabikho kwe- ukugcinwa kwamanzi, I-Alpha Labs M-Sten iyinhlanganisela enhle kakhulu yokukhwabanisa kuwo wonke umuntu.
Kunconywa ukuthi uthenge Amalebhu Omzimba Akhiwe Ama-SARMS Ama-Cycle Support 90 Amaphilisi futhi Amalebhu Omzimba Akhiwe SARMS PCT 90 Amaphilisi njengengxenye yokwesekwa kwakho kumjikelezo kanye nokwelashwa kwemijikelezo yokuthumela ubuthi emzimbeni futhi uhlale usesimweni esihle kakhulu. Lokhu kuyasiza futhi ukulinganisela ama-hormone akho futhi kukusize ugcine ukuzuza isikhathi eside ngenkathi ugwema 'i-post-cycle blues'.
Khipha isilo esifihliwe kuwe. Thenga i-Alpha Labs M-Sten manje!